China inqanaba umoya isebenza njani mveliso kunye nabenzi | Jiabei
Ityhubhu izinga kwinqanaba umoya yenziwe yeglasi. Udonga engaphakathi ityhubhu nqanaba umgangatho egosogoso kunye oyi ethile amagophe. Ityhubhu iqulethe ulwelo. Xa mgangatho axis, amadlu kwi kwinqanaba tube ukuya ekupheleni inqanaba ukugqiba indawo inqanaba. I elikhulu embindini amagophe kodonga engaphakathi kwinqanaba umoya, kungona isigqibo, kwaye ezincinci embindini zokuphuma amagophe ezinyongeni, i ukwehlisa isisombululo. Ngoko ke, kwirediyasi ugobile kwinqanaba umoya kugqiba ngokuchaneka kwinqanaba umoya. Inqanaba umoya ubukhulu becala kusetyenziswa ukuhlola flatness, tye, verticality kunye nendawo tyaba ufakelo izixhobo izixhobo umatshini ezahlukeneyo workpieces. Ingakumbi xa ukulinganisa verticality, inqanaba magnetic nga wendele kwi kwindawo osebenzela nkqo ngaphandle kwenkxaso manual, leyo kunciphisa umfutho yabasebenzi kunye uphepha impazamo womlinganiselo ezibangelwa ubushushu umzimba bomntu radiation kwinqanaba.
Le ezantsi nakwicala zenqanaba umoya ukuba ekunene-engile egqithe izakhiwo kunye ubude 2000mm, kwaye ukuchaneka yi ngokubanzi (0.02-0.025) mm / m. Ukuba umsebenzisi ineemfuno ezikhethekileyo, oko ungenziwa ngemfuneko ngamnye. Ngesakhiwo Ukugxila zenqanaba umoya iyodwa, xa kuthelekiswa ne isakhiwo yesiqhelo: 1. Kulula zero. 2. Emva hlengahlengiso, indawo kwiqanda akululanga utshintsho. Njengoko kubonisiwe kumfanekiso 1. Xa V-emise groove ezantsi iyajikeleza kwinqanaba umoya ehlabathini undoqo axis amaxesha 5, ukuba amadlu ukuhamba, uyakwazi ukuhlangabezana neemfuno ngokulungelanisa imeko-Screw 2. Le nto iye apha naphaya kwi-mveliso kwaye aliguqukanga ngokubanzi.
Ubume kwinqanaba umoya bahluka yokuhlela. Uhlobo isakhelo Inqanaba umoya jikelele sakhiwa umzimba umgangatho womoya engundoqo, kwinqanaba tyaba, into yokubamba adiabatic, kwinqanaba ephambili, cover ipleyiti kunye isixhobo zero ukulungiswa. Inqanaba umlawuli jikelele sakhiwa yequmrhu inqanaba, njengesigqubuthelo ipleyiti, kumgangatho ongundoqo kunye isixhobo zero ukulungiswa.
Inqanaba Umoya isebenzisa inqanaba umoya njengesixhobo yokulinganisa zokulinganisa ukufunda izinto. Eli nqanaba iglasi tube etywiniweyo, kwaye icandelo longitudinal kumphezulu ephakathi i arc kumphezulu setyhula oyi ethile amagophe. Ityhubhu kwiglasi inqanaba izaliswe kulwelo kunye viscosity lomlingani ephantsi, ezifana utywala, iEtere kunye umxube yayo. Inxalenye ngaphandle ulwelo idla ngokuba kwiqamza level. Kukho ubundlelwane ethile phakathi owela ngaphakathi kwama-ugobile kwicandelo longitudinal kumphezulu engaphakathi ityhubhu yeglasi kunye nexabiso iziqu. Ngokutsho kwesi siseko sibobu budlelane, utyekelo-moya kulinganiswa nga kulinganiswa.
Post ixesha: Jan-09-2020
360 bokushicilela Laser Level Green Beam , umfumani , Station Iyonke , enemilenze emithathu , Wall sigaba , Laser ukuKhanya ,